Global Aawaj | बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख न्यौपानेद्वारा पदभार ग्रहण (को हुन् न्यौपाने ?) बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख न्यौपानेद्वारा पदभार ग्रहण (को हुन् न्यौपाने ?)
बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख न्यौपानेद्वारा पदभार ग्रहण (को हुन् न्यौपाने ?)
२४ असार २०७७ 7:35 pm
बुटवल । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख डा. खिमान्द न्यौपानेले बुधबार एक कार्यक्रमका बीच पदभार ग्रहण गरेका छन् । त्रिभवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले मंलबार न्यौपानेलाई बुटवल बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो । असार २० गतेबाट क्याम्पस प्रमुख डा.शखिशरण सुवेदीको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै न्यौपाने क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन् ।
क्याम्पस प्रमुखको कार्यकाल सकिएपछि क्याम्पस प्रमुखले निमित्त क्याम्पस प्रमुख तोक्ने व्यवस्था भएता पनि निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख सुवेदीले निमित्त क्याम्पस प्रमुख नतोक्दा बुटवल बहुमुखी क्याम्पस ३ दिन क्याम्पस प्रमुख बिहिन बनेको थियो।नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख न्यौपानेले आफ्नो कार्यकालमा क्याम्पसमा भएका सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् । उनले आफू कुनै शक्ति केन्द्रको आडमा क्याम्पस प्रमुख नभएको भन्दै आफ्नो क्षमताले भएको बताए । उनले विधि, प्रद्धति र प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख डा. शखिशरण सुवेदीले आफ्नो कार्यकालमा आफूले गर्न सकेका सबै काम गरेको बताए । उनले आफूले सुरु गरेका केही नयाँ कामलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख न्यौपानेलाई आग्रह गरेका छन् । साथै उनले नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख न्यौपानेलाई सबै प्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख न्यौपानेलाई प्रध्यापक, कमर्चारी र विद्यार्थीहरुले बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए । कार्यक्रमको संचालन साहायक क्याम्पस प्रमुख विजय सापकोटाले गरेका थिए ।
नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख न्यौपाने वि.स. २०२४ वैशाख १५ गते अर्घाखाँचीको पाणेनी गाउँपालिका ५(मैदान)मा जन्मिएका हुन् । उनले २०५१ सालबाट काठमाडौँको अमृत साइन्स क्याम्पसबाट शिक्षण पेशा सुरु गरे । २०५२–२०५४ सम्म बुटवल बुहुमुखी क्याम्पसमा आशिक शिक्षकको रुपमा अध्यापन गराए । २०५४–२०६० सम्म बहुमुखी क्याम्पसमा नै करारमा शिक्षण साहयकका रुपमा अध्यापन गराएका थिए । २०६० सालमा नै उनी उप–प्राध्यापक बने । २०७२ सालमा सह–प्राध्यापक बन्नेका न्यौपानेले भारतको मिजोरम युनिभरसीटीबाट २०७५ सालमा भौतिक शास्त्रमा पि.एच.डी गरेका गरेका छन् ।